Kumanaan kun oo reer Tunisia ah ayaa isugu soo baxay Sfax ka dib markii ay ka mudaaharaadayeen dhimashada - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Wararka Kumanaan kun oo reer Tunisia ah ayaa isugu soo baxay Sfax ka...
Kumanaan kun oo reer Tunisia ah ayaa isugu soo baxay Sfax ka dib markii ay ka mudaaharaadayeen dhimashada
Kumanaan kun oo reer Tuniisiya ah ayaa shaqo joojin sameeyay arbacadii ka dib markii qof mudaaharaadayey uu u dhintay sunta dadka ka ilmeysiisa intii lagu jiray mudaaharaadyo lagaga cabanayey dib u furista goob qashin qub ah, iyadoo dhibaatooyinka deegaanka ay ku soo badanayaan dalka ku yaal waqooyiga Afrika.
Abderrazek Lacheheb, oo 35 jir ah, ayaa subaxnimadii hore ee Talaadadii ku dhintay Agareb, oo ka tirsan gobolka Sfax ee xeebta dhexe, ka dib markii ciidamada ammaanku ay isticmaaleen sunta dadka ka ilmeysiisa si ay u kala eryaan dibadbaxayaasha.
Mid ka mid ah dhakhaatiirta iyo xubin qoyska ka tirsan ayaa sheegay inuu u dhintay neefta oo ku dhagtay, xeer ilaalinta ayaa sheegtay inay furtay baadhitaan.
Wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegtay in Lacheheb uu u dhintay xaalad caafimaad oo horay haysatey ee aanu u dhiman neefqabato ka timid sunta dadka ka ilmaysiisa.
Arbacadii, magaaladu waxay samaysay shaqo joojin guud, kumanaan qofna waxay socod ku mareen meel lix kilomitir (afar mayl) u jirta magaalada ilaa goobta qashin-qubka, taas oo u adeegta ku dhawaad ​​hal milyan oo qof ilaa laga xidhay bishii Sebtembar cadaadis uga yimid dadka deegaanka.
Laakiin mas’uuliyiinta ayaa go’aansaday Isniintii in dib loo furo goobta, taasoo dhalisay mudaaharaad degdeg ah.
Arbacadii, kumannaan qof ayaa magaalada dhex maray iyagoo ku dhawaaqaya: “Waxaan xaq u leenahay nolol sharaf leh, waxaan xaq u leenahay inaan hawo nadiif ah helo!”
Ciidamada ammaanka ayaa mar kale goobta la soo dhigay iyagoo fara badan, waxaana ay isticmaaleen sunta dadka ka ilmeysiisa si aysan dadku u gaadhin goobta.
Mid ka mid ah mudaaharaadayaasha ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee AFP in booliisku ay “xidheen” magaalada.
“24-kii saac ee la soo dhaafay waxaan aragnay ciidamada ammaanka oo ilaalinaya qashinka iyagoo burburinaya muwaadiniinta, burburinaya xuquuqda dadka deegaanka, ee ah inay dadku helaan deegaan caafimaad qaba iyo nolol sharaf leh,” ayuu yiri.
Mid kale ayaa yiri: “meesha qashinka lagu shubo, waanu tageynaa, waa xidhaynaa, halkaan ayaan joognaa toddobaad, bilo iyo sanado si aan ugu dagaalano in meesha la xidho”
Waxa uu sheegay in qashinkaas ay magaalada ku hayeen cudurro iyo ur xun muddo 14 sano ah. Labaduba waxay codsadeen inaan magacyadooda la sheegin.
Dadka deegaanka ayaa ka cawday inay buuxsantay iyo in sunta kiimikada lagu daadiyo xarun loogu talagalay qashinka guriga.
Socodkii Arbacada ayaa yimid ka dib markii ururka shaqaalaha ee UGTT ee awooda badan uu ku baaqay shaqo joojin guud oo dadweynaha iyo waaxyaha gaarka loo leeyahay, taas oo ka dhalatay waxa ay ugu yeereen “faragelin bahalnimo ah oo ay sameeyeen ciidamada ammaanka” fiidnimadii Isniintii la soo dhaafay.
Guud ahaan gobolka Sfax waxaa hadheeyay mudaaharaadyo toddobaadyo socday oo ka dhashay dhibaatada qashinka, taasoo la arkayay qashin badan oo daadsan waddooyinka.
Tan iyo markii xarunta Agareeb la xiray, degmooyinku waxay diideen inay aruuriyaan qashinka, iyagoo ugu baaqay gobolka inuu helo xal waara.
Tunisia ayaa in muddo ah la soo deristey dhibaatooyin la xidhiidha wax ka qabashada 2.5 milyan oo tan oo qashin ah oo la soo saaro sannad kasta, taasoo badi lagu daadiyo meelaha qashinka lagu daadiyo, iyadoon dibna loo warshadeday ​​waxbana.
Previous articleDalka Benin ayaa dib ulasoo wareegay hanti farshaxan oo Faransiisku hore uga dhacay
Next articleIran waxay diyaar u tahay ‘heshiis kasta oo wanaagsan’ oo wadahadalada nukliyeerka laga gaadho